MZ Edu ပြောင်းလဲမည်။ — MYSTERY ZILLION
MZ Edu ပြောင်းလဲမည်။
Gipsy ရေးထားပြီးသားပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ moodle ကနေ wiki ကို ပြောင်းလဲတာကို ထောက်ခံမခံ ကို ဒီ thread မှာထည့်လိုက်ပါတယ်။
မပြောတတ်ဘူး။ အသင့်တော်ဆုံးကတော့ လက်ရှိဟာဘဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ သုံးရတာ အဆင်မပြေသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ၀င်သင်ဖို့တောင် တော်တော် ခေါင်းမူးတယ်။ mz ထဲမှာဘဲ နဲနဲချင်းရေးမလားတောင် စဉ်းစားတယ်။ ၀ီကီ ပုံစံနဲ့တော့ လိုက် မလိုက်မသိပါ။ ကောင်းမယ်ထင်ရင် လုပ်ကြပါ။
Yes.... me too... moodle is good but something messy and too slow. I like MZ fourm style as Mr. DBA. MediaWiki may more complicated than Moodle.
အတို တို့ mz edu အသစ် ပြောင်းရင် အနော် တိ့ု login အသစ် ပြန်လုပ် ရ မှာ လား ဟင် ။ ပြီးတော့ course တွေက ရှေ.ပြန်ရောက်တွား မှာ လား ဟင် ။ ဖြေပေး ပါအုံးနော် :77:။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Mzedu ကို အားပေးပါတယ် :6:
လိုဘူးလို့ထင်ပါတယ် .... အဲလိုသာပြောင်းရရင်သေပြီပေါ့ ... ဟုတ်ဘူးလား:39:
ကျနော့် အထင်တော့ Wiki ပုံကြီးတော့ ကောင်းဘူးထင်တယ်။
ပြောင်းသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် ... ဒါပေမယ့် Wiki ပုံစံကို မပြောင်းသင့် ပြောင်းသင့်တော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ ... ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့ Wiki ပုံစံကို သိပ်မကြိုက်ဘူးဗျ .... ဒီလိုပဲ moodle ကိုလည်း ကြိုက်ဘူး ...
အခုလက်ရှိက လူတိုင်းဝင်သင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ။ ဘာသုံးသင့်လဲ။ wiki ကတော့ ဆရာဆရာမတွေ သင်ဖို့လွယ်မယ်ထင်လို့ပါ။ တစ်ခြား ဘာတွေ သုံးသင့်သေးလဲ။
Change! Yes, we can! Change happens!
We can do it! :D:D:D
MZ-Edu က Learning Site ဖြစ်လို့ Moodle လို E-Learning site နဲ့သင့်လျှော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Moodle ကိုသုံးရာမှာ MZ org က Fully structured Education အဖွဲ့လည်းမဟုတ်၊
ပြီးတော့ Moodle ရဲ့ learning curve နဲ့ interface က post ရေးတင်သလို တင်ချင်တဲ့
သင်တန်းပို့ချသူတွေအတွက် မလိုအပ်တဲ့ step တွေပါ၀င်နေပါတယ်။ တိုတိုပြောရင် Moodle
ကကောင်းတော့ ကောင်းတယ်၊ ကောင်းလွန်းနေတယ်၊ အသုံးမချတဲ့၊ မလိုအပ်တဲ့ Feature တွေ
Wiki ပုံစံနဲ့သင့်၊ မသင့်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ Edu site နဲ့ ရည်ရွယ်ပုံ နည်းနည်းလွဲနေလားလို့။
ကိုသာသာပြောတာမှန်ပါတယ်... Moodel က အပြည့်စုံလွန်နေတယ်.. ကျွန်တော်တို့က ...အပြည့်သုံးတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့... MZ forum မှာလိုပဲ... ဆရာက post အရှည်ကြီးတစ်ခုနဲ့ သင်စရာရှိတာကိုသင်သွားလိုက်... အောက်က ဆွေးနွေးချင်သူတွေက ၀င်ဆွေးနွေးလိုက်၊ ဆရာလုပ်တဲ့သူက ပြန်ဖြေစရာလိုရင် quote လေးနဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်... အဲဒီလို interactive ပုံစံလေးနဲ့ သင်တဲ့စံနစ်ကပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုင်း ... ဆက်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး...။
ဟုတ်တယ် အဲဒီအတိုင်းပဲ ကောင်းမယ် ... ဖိုရမ်ပုံစံအတိုင်းပဲကောင်းမယ်ထင်တယ် ... ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက ဒီဖိုရမ်နဲ့ တွဲထားလို့တော့ မသင့်ဘူးထင်တယ် ... ရှုပ်ထွေးကုန်လိမ့်မယ်။ နောက်အသစ်တစ်ခု လုပ်မှဖြစ်မယ် ... ပြီးတော့ vBulletin ကို မသုံးပဲ phpbb ကို သုံးသင့်တယ် ဒါမှ ပိုက်ဆံ မကုန်မှာ ....
အင်း.. အဲဒါလည်းကောင်းတယ်... ကျွန်တော်တို့တွေ အတွက် moodle က ကောင်းပေမယ့် နှေးနေတယ်.. အဲဒါက အဓိက ပြသနာ.. နောက်ပြီး ဆရာတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့ GUI , သင်ကြားတဲ့လူတွေ ကျောင်းသားတွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် ဖွင့်ရတာ နှေးနေတာ ဆိုးတာဗျ... phpbb သုံးမယ်ဆိုလည်း မဆိုးဘူးဗျ...
phpbb က MMEnglish မှာ သုံးထားပါတယ် ... MZ က feature အကုန်နီးပါးရပါတယ် .. တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတာက Editor ပါ ... သူကလည်း ဘီတာ အနေနဲ့တော့ ထွက်နေပါပြီ ... နောက်ဆို ထွက်လာမည့် သဘောရှိပါတယ် ...
ပြောင်းပါ ... ပိုကောင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ... :6:
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လည်း ကို phpCrazy ပြောသလို forum ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားစေချင်တယ်။:)
ဟုတ်ပါတယ် ဝီကီလည်းကောင်းပါတယ် ဖိုရမ်လည်းကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆရာတွေမအားတဲ့အခါ ကျရင် တခြားလူတွေက ဝိုင်းပြီးအဖြေရှာ ရတာပေါ့
မဆိုးဘူးဗျ... ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပါ့မယ်... အရေးကြီးတာကတော့ မြန်ဖို့နဲ့ စာသင်ရလွယ်ဖို့ပါ...
ကျွန်တော်လည်း စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ သေးသေးလေးဗျ မကောင်းဘူးမစမ်းနဲ့ ကျေးဇူးတွေလည်း စွပ် မတင်နဲ့ဦးဗျို့
ဘာလဲ သေးတယ်ဆိုတာ... ဘာကိုသေးတယ်လို့ပြောတာလဲ။ ရှင်းရှင်းလုပ်ပါ။ phpbb က powerful ဖြစ်ပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူးဗျား အဲဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး စိတ်ကြီးပဲ ပထမ ကျွန်တော်ပေးတဲ့လင့်ကိုပြောတာပါ
forum ပုံ စံဖြစ်သွားရင် ပွထသွားမလားလို့
ဘာမှနားမလည်သေးတဲ့စပီးတော့သင်မဲ့သူအတွက် ခေါင်းစဉ်ကွဲလေးတွေများနေရင် မလွယ်ဘူးထင်တယ်
ဆရာတို့ အဆင်ပြေသလို ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ ကျတော်က တော့သင်တန်းကို တက်နေမှာပဲ
နှေးတာကတော့အမှန်ပဲ ပြောင်းသင့်မပြောင်းသင့် ကတော့မပြောတတ်ပါ